HomeWararka MaantaBordeaux Oo Ka Quusatay Zidane Meel kalena Uga Wareegaysa
Bordeaux ayaa ku dhawaaqday inay ka noqotay doonistii ay ku doonaysay in Zinedine Zidane u noqdo tababaraha cusub ee kooxda, isla markaana hadda wixii ka dambeeya ay wada hadal la bilaabayso Willy Sagnol si uu ugu buuxiyo booskaasi.
Naadiga garoonka The Stade Chaban-Delmas ayaa bilaa tababare ahayd tan iyo markii uu dhacay heshiiskii uu kooxda kula joogay tababarihii hore ee naadiga Francis Gillot, laakiin rajo fiican ku qabtay in Zizou markale dib ugu soo noqon doono garoonkii uu kubada cagta salaankeeda ka soo qabsaday ee Bordeaux, laakiin rajadaas ayaa iyana noqotay biyo col dhaanshay.
“Nasiib darro, isku day kasta oo aanu ku doonaynay Zidane inaanu heshiis kula galno, waxaan ka sidnaa gacmo madhan,” Ayuu gudoomiye Jean-Louis Triaud ku yidhi warfidiyaha RTL.
“Waxaan idiin cadaynayaa inaanu noqon doonin tababaraha kooxda Bordeaux.
“Arinta Zidane waxaa si adag ugu dhagan Real Madrid. Indhaha kama lalin kartid oo isma diid siin kartid marka labadiisa carruur ahiba ay ku jiraan akaadamiga dhalaanka ee kooxda, qoyskiisuna uu la qabsaday nolosha iyo ku noolaanshaha Madrid, halkaas oo ay ku sugnaayeen 11 sanno. Waa xaalad aad u kakan.”
Willy Sagnol, oo wakhti xaadirkan ah tababaraha xulka Faransiiska ee da’doodu 21 jirada ka hoosayso, ayaa ah ninka ugu dhaw ee loo tirinayo inuu qabanayo shaqada tababarka ee naadiga 2009 kii noqday horyaalka France ee Liga 1, in kasta oo uu carabkiisa ka illaaliyay gudoomiye Triaud inuu sheego magaca tababaraha cusub ee naadigu ka uu noqonayo.
“Waxaan idiin xaqiijin karaa inaanu heshiis la saxeexanay ninka noqonaya tababaraha cusub ee naadiga, laakiin wali si rasmi ah looguma magacaabin, waxaana wali noo dhiman woxogaa faahfaahin ah,”ayuu yidhi odayga 64 jirka ah ee kooxda gudoomiyaha u ahi.
Thomas Muller :- Waxaan Diiday Dalab Iiga Yimid Man United”
Koobka Aduunka Ee Ciyaarta Cricket Oo Ka Furmay Qaarada Australia